Dhugeeffannaa Oromoo: "Waaqi ilmee namaa uume, Xaphoo fi Xaphaphoo jedheen" - BBC News Afaan Oromoo
Dhugeeffannaa Oromoo: "Waaqi ilmee namaa uume, Xaphoo fi Xaphaphoo jedheen"
24 Onkololeessa 2018
Goodayyaa suuraa Hayyuu argaa dhageettii Booranaa Aab Liiban Halakee
Ummanni Oromoo Ummata hortee Kuush kan Baha Afriikaa keessatti aadaa, seenaa, duudhaa fi afaan mataasaatii qabatee jiraachaa jirudha.
Waa'ee uumaa fi uumamaarratti beekumsi Oromoo wayita xiinxalamu, Uummanni Oromoo uumeen walaabuu baate jedhee dhugeeffata.
Walaabu bishaan ganamaati. Lubbuun namaa bishaanirraa argame jedha Oromoon.
Jaarsi Argaa Dhageettii Aab Liiban Halakee Duubaa Oromoo Booranaa kan seera Argaa dhageettii yeroo dheeraaf baratan Oromoo biratti waan cufti eebbaan jalqabama eebbaanileeen xumurama jedhu.
Eebbaanis eegalan ''Barri nagaa bariin nagaa, Gadaan ta roobaa nagayaa, horaa bulaa deebanaa''
Sirni Gadaa sirna badaaf qoricha ture
Oromoon Ormaa eenyu?
Waan uumamaarraa wayita dubbatan ''uumaan waa hundaa rabbi tokkicha" jedhu.
"Akka dhugeeffata Booranaatti waaqni odoo namallee hin uumin guyyoota torban uume. Guyyaan torban kunneen maqaan isaanii Fullaasa, Muggisa, Libaasa, Mardiida, Maakula, Sabbaaqa, Daraara jedhamu."
"Guyyaa torban kanneen booda ilmee namaa uume, isaaniin Xaphoo fi xaphaapho jedheen."
"Calqaba Xaphoo uumee achiin duuba xaphaapho itti dareef. Lafti inni itti uumelleen Liiban. Lafa addunyaa kanaa cufa Liibantu hangafa jetti Oromoon."
"Fulaan amma Galoo Galaanaa Eden jedhan hiriyaa lafa Liiban ture. Bakki kun dhoqqeellee bishaanillee waan qabuuf waaqni kanarraa nama uume. Liiban hangafa jetti Oromoon'' jechuun ibsan.
Lafti Jabuutii as Liiban kan jedhan Aab Liiban Halakee ''hangaftummaan Liiban karaa amantaallee ni dhugeeffatama, akka amantaa Islaamaatti karaan fuula itti deebifatanii salaatan ykn dulatan Makkaan kallattii Liiban irraan jira" jedhu.
"Galaanaa Diimaa qofatu gidduu jira, walitti kaluudha. Kanaanis hangafa. Bakki itti dulatan ammoo laga Buutii jedhama ture. Sanarraati maqaan Jabuutiillee kan moggaafame.'' jedhan.
Sabummaa fi teessuma lafaarratti beekumsa Oromoo
Haala walii galaatiin Oromoon galaanota sadiin daangeffamuu argaa dhageettiirraa na ga'eera jedhu aab Liiban.
''Galaanonni kunneen Keeniyaa, Itoophiyaa fi Sudaan keessatti argamu. Ammas galaanni Oromoon maqaa dhahattu sagali. Isaan keessaa sadiin daangeffamti" jedhu.
"Gara Il-boruu kanaan gara aduun baatuun galaana Gannaalee, gara dhihaan galaana Sagan, gara Keenyaa kanaan galaana Marooti."
"Galaanni Maroo wararbaa, Ganaale hararbaa ykn nageellee Booranaatiin gadi bu'aa, galaanni Sagan daangaa Sudaanii ba'a. Kun qubsuma Oromoon dur irratti of argite. Gara oliitiinilee tulluu nam durii kan madda walaabuu jirutti daangofti'' jedhu.
"Rabbiin gosa suni namaan hin jenne, gochi rabbiin namaaf hile afaani. Ka qoonqoon wal taatu obboleewwan. Kan afaan kee dubbatu gosa kee malee rabbiin gosa qoqqoodee hin uumne jedhee dhugeeffata Booranni" jedhan.
''Namuu afaanuma dubbateen gosa tolfate. Ammoo uummati Oromoo Booranaa fi Bareentuma. Isaan obbolaadha, Sikkoo fi Mandoo, Kontoomaa fi Daarimu, Maccaa fi Tuulama, Ituu fi Humbanna, Sabboo fi Goona, Raayyaa fi Aseeboodha. Gadaa shaniin bulu" jedhu.
Tulluu Namdurii hanga Mombaasaatti gadaa kanaan bulaa ture Oromoon jedhu Aab Liiban Halakee, wayita eebbisanillee ''Mombaasaa garbiin nagaa, tulluun nam durii nagaa, yaa'iin shanan nagaa, Gadaan shanan nagaa, laduun shanan nagaa jedhu'' jedhan.
Beekumsa waa'ee uumamaa argatanirraa ka'anii, namni kan beeku erga namni uumameeti malee isaan dura kan jiru hin beeku jedhan, waa'ee lafasaa nama otoo hin taane isa uumetu beeka jedhu.
Beekumsa lubbu qabeeyyii fi hawaa argaa dhageettii keessatti
Beekumsi Oromoo tokko qabeenyi namaa waa ja'a ta'uudha jedhan Aab Liiban. Kotte duudaa sadi fi sadeen aannan mi'aa jedhan.
Sadeen aannan mi'aan Lalleessa ykn Re'ee, Hoolaa fi Loon. Kotte duudaan sadeen Harree, Gaangee, Farda.
Kotte duudaa sadeen waan ilmeen namaa nyaattu miti, sadeen aannan mi'aa waan ilmeen namaa soorattu jedhu.
Akka durdurii keenyaatti qabeenya kana lafumatti argatan.
''Namni loon arge Guta Galoo jedhan, nami Harree arge Gabaaba Galoo jedhan, nami Re'ee arge Iyya Galoo, kanaaf ammaan tana nami re'ee tissu itti iyyee wan tokko dhayata."
Iyya Galoo, Iyyee raroo jedhanii re'ee tissan amma, maan jennaan akka kan uumamaa sun hin dagatamneefi jedhu.
Looniifillee booree guta galoo obaan gutee galee jedhani wayita faarsan, namni loon argate Guta Galoo waan ta'eef akka hin dagatamneef yaadameeti jedhu.
Wayita harree fe'atanii daamanillee gabaabaa kiyya galoo gabaabinni amaloo, dhaachiftuu ganni qabee dhaane horrisi qabee jedhan.
Akkanaan faarsaa uumama yaadatu jedhu Aab Liiban Halakee.
Aadaa Booranaa fi tamboon attamiin walitti hidhaman?
Keesumaa Hoolaan wayyu jedhan. Seenaasaa wayita himan ''Nama waaqa dhugeeffatu tokkoon guyyaa tokko waaqi akka mucaasaa qalu ajaje. Achii namichillee ajaja fudhatee wayita mucaasaa qaluuf jedhu waaqni hoolaa fidee aalbee jala kaa'e."
"Akkanaan mucaan ba'ee hoolaan gorra'ame. Kanarraa ka'anii hoolaan ilmee namaaf wayyu jedhan."
Kan biraammoo yoo waldhibdeen uumame hoolaadhaan araarsan jedhu.
"Namni hoolaan gadi dhufnaan kan nama ajjeesellee yoo ta'e araara hin didan. Waaqiyyuu lubbuu namaatiin wayyee wayyeeffachuu malle jedhan. Yoo namni ykn gosti wallole hoolaa walitti hidhatan."
Akka Oromoon jettutti ''mataan bineensotaa shani Qeerransa, Leenca, Warseessa, Arba, Gafarsa" jedhu.
"Samii keessaammoo hangafi Urjii. Urjiin 9999. Akka booranaatti qaalluun urjiitti akeekama. Urjiin ka roobaa jiraa ka bonaa jiraa, qilleensi waaqaa yeroo afur jijjiirama."
"Ji'a sadiin qoqqoodama. Akkanaan wayita qilleensi jijjiiramu urjiin fulaa qaraatii deemtee fulaa dhibii ejjiti. Yoo qilleensi jijjiiramu urjiitu mallattoo agarsiisa'' jedhan.
Muki Oromoon beeku 770 kan jedhan Aab Liiban kanneen keessaa 385 kan qoraattii qabuudha, 385 ammoo kan qoraattii hin qabneedha jedhu.
Kan qoraattii hin qabne qorsa. Muka ganna 900 taa'ufaatu jira. Akka dhaddachaa, qalqalchaa, halloo, ejersa, Odaa, dambii, qilxuu muka gara 32ti.
"Seerri 24, afur dhoksaadha, 20 kan namni cufaati"
Barnoota argaa dhageettii ganna 6 irraa ka'anii akka barachaa turan kan dubbatan Aab Liiban Halakee maanguddoota sadirraa baradheera jedhu.
''Maanguddoon argaa dhageettii seera nama barsiisan. Seerri 24, kana keessaa afur dhoksaadha, 20 kan namni cufaati" jedhu.
"Seeronni afran adulaa, hayyuuwwan garbaa, bokkuufaa taate himuu dandeetta. An ittiin baradhee jira garuu himuu hin danda'u" jedhu.
Seeronni biroon seera ilmoo namaa, kan bineensa, kan biqilootaa, kan dubartootaa, kan waraanaa, kan nageenyaatu jiru jedhan.
"Balaan ibiddaa, bishaanii, harrabi namni wal arrabsu, wayita namni wal haadhu, daangaarratti wal waraanuun, hanni, cubbuun kun hunduu seera waraanaa jalatti ilaalamu jedhan" jedhan.
"Oromoon wanninni nyaatu ka bineensa jedhan hin jirtu. Kotte duudaa hin nyaatuu, kan kottee baqaqaa ni nyaata. Ka qeenca kaarraa waaqi ni halaalche jedhan. Ka kaarra hin qabnemmoo halaala miti jedhan."
Walumaa galatti Oromoon uumama lubbuu qabu akkanaan qooda: Allaattii, Kotte duudaa, sadeen aannan mi'aanii, Bineensa fi bofaa buutii jedha. Kana cinaan horiinillee ni jirti, saree fi adurreen as keessatti ramadamu jedhu.
Akka Booranaatti warri ayyaantuu urjii ilaaluudhaan barri bara roobaa ykn bara hongee ta'aa himu jedhan.
"Ayyaantuun warra uumamaan adeemsa urjii beekaniidha. Beekumsa saayinsii ammayyaan gadi hin taane warra qabaniidha" jedhu.
Bakkalchi akka urjii hogganu, ji'i bakkalcha akka hoogganu, aduun akka ji'a hoogganu seera qilleensaa fi urjii jalatti barsiisu.
Akka dhugeeffannaa Oromootti nafa namaa waaqni dhoqqee dhayee qalbiimmoo ho'a aduu fi qabbana ji'aarraa itti dare jedhan.
Kanaaf amma nami yoo du'e kan dhoqqeerraa hojjetame lafumatti deebi'a, ka qabban ji'aa fi hoo'a aduurraa dhufe garam akka deeme hin beektu jedhu.
Beekumsi argaa dhageettii waan dhageessee fi argite tokko utuu hin dagatiin umurii kee guutuu dhalootaaf dabarsaa jiraachuu ta'uu kan dubbatan Aab Liiban Halakeen waan afaaniin daddarbaa dhufe kana kitaabatti jijjiiruuf yaada akka qaban dubbataniiru.
Saba tokko kan walitti fidee obbolaa godhu afaansaa ta'uu kan dubbatan Aab Liiban sabi kun yoo afaan kana wallaale ni bada jedhan.
''Afaan, seenaa, aadaa fi duudhaan baduu hin qabu, Aadaan dhugaadha, dhugaan ammoo kan waaqaati. Duudhaan seera. Kanneen yoo cimsanne tokkummaa dhugaa uumna'' jedhan.
3 Fuulbana 2018
9 Caamsa 2018
Janaraal Asaaminew Tsiggee eessa jiru?
Dubartii xiyyaara dhaabbate keessatti qofaashee hirriibaa dammaqxe